Ukudla kwe-carbohydrate > Ukudla ngesifo sikashukela
Ukudla okusebenzayo kwamaviki ama-2 ukuze wehlise isisindo
Ama-carbohydrate (ushukela) noma i-cargo yizingxube ezikhethekile ze-organic ezidingekayo empilweni yabantu, izilwane nezitshalo. Ngenqubo ye-photosynthesis yokugcina, iplanethi ithola le ngxenye ebalulekile.
Ebantwini, ama-carbohydrate enza imisebenzi eminingi engenakulungiswa. Phakathi kokubaluleke kakhulu kukhona ipulasitiki namandla. Njengengxenye yamamolekyuli ayinkimbinkimbi ngokwengeziwe, izimpahla ziyabandakanyeka ekwakhiweni kwe-DNA. Kepha ngaphezu kwakho konke, la makhompiyutha aziwa njengomthombo ophambili wamandla womzimba. Kanye ngaphakathi, ziyahlanganiswa, ngenkathi zikhiqiza amandla. Ngokuphuka kwegramu eyi-1 yama-carbohydrate, kukhululwa i-4.1 kcal ne-0,4 g yamanzi.
Ama-ripars aqukethe amayunithi akhethekile wesakhiwo. Ngokuya ngenani lalawa amayunithi, ahlukanisa: ama-monosaccharides (1 iyunithi), ama-disaccharides (amayunithi ama-2), ama-oligosaccharides kanye nalawo ayinkimbinkimbi kakhulu - ama-polysaccharides. Ngokufana, laba abasindayo ekudleni kwe-carbohydrate.
Wonke ama-carbohydrate alula aqukethe inkomba ye-glycemic ephezulu (i-sucrose, i-fructose, ushukela, i-lactose). Kanye esiswini, zidonswa ngokushesha futhi ziguqulwe zibe ushukela. Umzimba womuntu "ngobuqili" uyinkimbinkimbi kakhulu futhi akulula kakhulu ukuwufeza. Ukuze uvikele ukuvela kwe-hyperglycemia, umane uguqula ushukela ube ngamafutha. Inqubo enjalo, kusukela “ekubukeni” komzimba womuntu, ilusizo kakhulu, ngoba amafutha agcinwe ayisiqinisekiso somthombo wamandla ngosuku lwemvula. Lesi isicupho sabo bonke abantu abakhuluphele, ngokwehla okukhulu kwe-glucose egazini, umuzwa wendlala uyavela. Ngakho-ke, lapho umuntu edla amaswidi, uyaqhubeka nokufuna ukudla.
Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi angolunye udaba. Lokhu kuqala, i-glycogen, isitashi ne-cellulose. Lezi zingxenye zakhiwa amayunithi amaningi wokuhleleka. Ngakho-ke, ukugaya kwabo nokusebenza kuthatha isikhathi esithe xaxa futhi, okubaluleke kakhulu, amandla.
Umongo wokudla kwe-carbohydrate
Kunombono wokuthi ama-carbohydrate ayimbangela eyinhloko yokukhuluphala ngokweqile. Ngokuphikisana nesizinda sokudla okuphelele kokudla okusheshayo, imikhiqizo esezingeni eliphansi nokudla okusheshayo - lokhu kungabonakala kuyiqiniso. Kepha, leli phutha lisuselwa ekungaqondini kwenkomba ye-glycemic yama-carbohydrate ngokwawo.
Inkomba ye-glycemic, empeleni, ijubane kuphela lapho umthwalo wezimpahla usenziwa. Kuma-carbohydrate alula, aphakeme, futhi kwabayinkimbinkimbi aphansi. Ukukhishwa kwabo ngokuphelele ekudleni, vele, kuzoholela ekulahlekelweni kwamakhilogremu ambalwa. Kepha, kungekudala, umzimba "uzophindisela" lokhu kushoda ngokubonakala kwesisindo sezinkinga zempilo kanye nesisindo esifanayo.
Ukudla kwe-carbohydrate kususelwa kumgomo: shisa okuqongelele futhi uvikele indawo entsha yamafutha. Ngaso leso sikhathi, ama-carbohydrate asheshayo awafakwa ngaphandle, ukuze kungancishiswa okuqukethwe ushukela kube ubuncane bezinhlekelele. Akubona abesifazane kuphela abaphendukela kukho, kodwa futhi nabasubathi abangochwepheshe kwalokhu okubizwa ngokuthi komile. Ama-Nutritionists athuthukise ezinye izeluleko eziwusizo ezijwayelekile zokunciphisa umzimba:
phuza okungenani amalitha ayi-1.5 wamanzi ahlanziwe ngosuku,
Ukudla okukodwa kokudla kufanele kube yi-100 g, uketshezi - 150 ml,
ukudla kufanele kuhlukaniswe (ama-5-6 ukudla),
3 amahora ngaphambi kokulala ungakudli,
faka ngaphandle okuthosiwe, ushukela omnandi, utshwala,
umsebenzi womzimba kufanele ukhule kancane.
Lokhu kudla kufaka i-fiber nesitashi kanye nama-carbohydrate athile alula. Phakathi kokuthengiwe okudingekayo kuzoba: okusanhlamvu, izithelo, imifino, inyama ebusayo, inhlanzi, imikhiqizo yobisi. Ngokungafani nokunye ukudla, lokhu kunemenyu ekhanyayo nehlukahlukene. Ushukela nefulawa kuphela lapho kufanele kushiywe ngokuphelele. Inani lamaprotheni (inyama, amaqanda, imikhiqizo kafulawa) nalo liyancishiswa.
Yonke le nkambo ithatha amasonto amabili. Izinsuku zokuqala eziyisikhombisa zihambisana nombuso onamandla kanye nenani elincane lama-kilojoule angenayo. Ngalesi sikhathi, kuthatha kusuka kumakhilogremu ayi-6 kuye kwayi-7 wesisindo ngokweqile. Uma kukhulunywa ngokukhuluphala okuxegayo, ukuncipha kwesisindo kuzoba kukhudlwana. Amadoda ekudleni kwe-carbohydrate alahlekelwa isisindo nzima kakhulu kunabesifazane. Isinyathelo esilandelayo ukuhlanganisa umphumela. Ukulahlekelwa isisindo esontweni lesibili kuhamba kancane, kepha amakhilogremu alahlekile ahamba isikhathi eside. Ngokwokubuyekezwa kwalabo asebeyiqedile yonke le nkathi yokudla kwe-carbohydrate, i-0.5-1 kg ingabuya ezinsukwini ezisanda kwedlula. Lokhu akufanele kwesabe, ngokudla okufanele nokuzivocavoca okulinganiselayo, isisindo sizinza.
Ngaphezu kwenketho yamasonto amabili aphambili, sekudliwe isidlo se-carbohydrate sesonto elilodwa. Kuboniswa umbuso onzima kakhulu, ukunciphisa umzimba ngokushesha futhi kunconyelwa ezimweni eziphuthumayo.
Ezinsukwini eziyisikhombisa zokuqala, lokhu kudla kuzoqukatha imikhiqizo yobisi nemifino. Umuntu okhonzayo kufanele angabi ngaphezu kwe-100 gr. Ungakha ngokuzimela imenyu, ngaphandle kokudla okuvinjelwe: amazambane, amaswidi, amanzi acwebezelayo, ushukela, imikhiqizo kafulawa.
Imenyu eyisampula evikini lokuqala ingaqukatha:
Ukudla kwasekuseni: i-oatmeal, izithelo, ushizi wekhishi, ikofi elimnyama ngaphandle koshukela noma itiye.
Isidlo sasemini: i-150 ml ye-kefir, iyogathi yemvelo noma ubisi olubilisiwe olubilisiwe.
Isidlo sasemini: inhlanzi ebhakwe, imifino enziwe noma eyenziwe eyosiwe, ubhontshisi, udali.
Ukudla okulula: i-150 ml ye-kefir, iyogathi yemvelo noma ubisi olubilisiwe olubilisiwe.
Ukudla kwakusihlwa: isaladi yemifino, iklabishi elihanjisiwe, ibele lezinkukhu elibilisiwe.
Ezinsukwini eziyisikhombisa ezilandelayo, ama-servings akhuphuka aze afike ku-200 amagremu wokudla kanye nama-250 amagremu koketshezi. Kuyo yonke inkambo, ngaphambi kokudla, kunconywa ukuphuza i-decoction ye-calendula, ukuze ulondoloze ukugaya.
Imenyu eyisampula evikini lesibili ingaqukatha:
Ukudla kwasekuseni: iyogathi yemvelo enezithelo, okusanhlamvu, ushizi wekhotishi, iqanda elibilisiwe (kungabi ngaphezu kwezikhathi ezi-2 ngesonto).
Isidlo sasemini: 250 gr of kefir noma idlanzana lamantongomane.
Isidlo sasemini: inyama noma inhlanzi enendishi eseceleni yemifino.
Isinaphi: Amagremu angama-250 e-kefir noma ubisi olubilisiwe olubilisiwe.
Ukudla isidlo sakusihlwa: irayisi ebilisiwe nemifino, amasaladi ayoliswe ngejusi kalamula, inhlanzi.
I-Calendula decoction yokudla kwe-carbohydrate
i-calendula - 1 tbsp. l
ISt John wort - 1 tbsp. l
i-chamomile - 1 tbsp. l
Zonke izinto zithengiswa ekhemisi ngesimo sezimali ezomile. Izithako ezidingekayo kufanele zithululwe ngengilazi eyodwa yamanzi abilayo, amboze ngokucophelela bese ubamba kuze kube yilapho amanzi ephola. Bese udlula ngesihlungo esihle bese ugcine esitsheni seglasi endaweni epholile. Umhluzi okulungele ukuthatha u-50 ml ngaphambi kokudla.
Ukudla kwezibalo ze-carbohydrate
Enye yezinketho zokudla kwe-carbohydrate kususelwa ekubalweni kwenani lemithwalo edliwayo. Babalwa kuma-carbographs abizwa ngokuthi (kbg), okuyigremu efanayo. Umkhiqizo ngamunye uqukethe inani elithile lama-carbohydrate, ukusuka ku-0 kuye ku-100. I-120-150 kbg ingadliwa ngosuku ekudleni okunjalo. Itafula lokudla kwe-carbohydrate liqukethe ukudla okuyisisekelo kokudla okujwayelekile.
Umkhiqizo (100 gr)
Isinkwa samawele 50,15
Isinkwa seRye 41,82
I-Butter bun 56,80
I-Buckwheat (kernels) 68,0
Amafutha (ummbila, umnqumo, i-sunflower) 0
Inyama yengulube 0
Iklabishi emhlophe 5,4
Peas oluhlaza 13,3
Ubisi lwenkomo 5,16
Ubhontshisi wekhofi 15,0
Itiye elimnyama 15,0
Mushroom cream isobho nge celery
Iresiphi efanelekile cishe noma yiluphi uhlobo lokudla kwe-carbohydrate.
Kukhonza okukodwa: amakhalori - 343, amaprotheni - 4.1, ama-carbohydrate - 4.9 kbg.
isililo esidliwayo esinamagatsha anamanzi - 200 gr,
ama-champignons - 200 gr,
izaqathe - 120 g,
amanzi ahlanziwe - 500 ml.
Zonke izithako zihlanzwa ngokweqile futhi zihlanzwa kahle. Konke kusikwa emabhulwini amakhulu futhi kuphekwe ngaphansi kwesivalo kuze kuphekwe ngaphandle kosawoti. Ngemuva kwalokho umhluzi ophelile ulethwa esifundweni sikakhilimu usebenzisa i-blender. Lapho ukhonza, ungafafaza ngepanini dill noma isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi aluhlaza.
Ukudla okuqinile kwe-carbohydrate
Kunconywa inguqulo eqinile yokudla kwe-carbohydrate isonto lonke ezimweni ezimbi kakhulu. Njengomthetho, baphendukela kuzo ngaphambi kwamaholide, imincintiswano noma njengoba kudalwe ngudokotela. Phinda le modi ingaba ngaphezu kwezikhathi ezi-2 ngonyaka.
Isici sombuso ohlelweni olucacile lokudla nemenyu ekhawulelwe kakhulu. Ukudla okungahleliwe kukhishwa ngokuphelele. Yonke imikhiqizo ebekiwe isatshalaliswa ngokulinganayo usuku lonke. Ama-receptions angama-6 kuphela ngo: 7:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00. Ukulandela imithetho, ungalahlekelwa kuze kufike kumakhilogremu ayisikhombisa esisindo ngesonto.
Imenyu Yesonto Lama-carbohydrate Diet
Usuku lokuqala: 400 g wamazambane abhakwe kanye no-0.5 l we-kefir ephansi.
Usuku Lwesibili: Amagremu angama-400 koshizi onamafutha aphansi namalitha ayi-0,5 we-kefir ephansi.
Usuku lwesithathu: amagremu angama-400 ezithelo (ngaphandle kwamagilebhisi nobhanana) kanye namalitha ayi-0,5 e-kefir ephansi.
Usuku lwesine: amagremu ama-400 ebisi yenkukhu ebilisiwe namalitha ayi-0,5 we-kefir ephansi.
Usuku lwesihlanu: amagremu angama-400 wezithelo (ngaphandle kwamagilebhisi nobhanana) kanye namalitha ayi-0.5 e-kefir.
Usuku lwesithupha: ukulayisha (kuphela amanzi)
Usuku lwesikhombisa: 400 g wezithelo no-0.5 l we-kefir ephansi.
Kulokhu, usawoti noshukela kufanele kuqedwe ngokuphelele. Kuyadingeka ukushiya ukudla okunjalo kancane kancane, ubuyise imikhiqizo ejwayelekile kanye nezingxenye ezikhulayo.
Ukudla okuningi kuhloselwe ukwehla okubukhali kwesisindo somzimba. Abaningi abafuna ukunciphisa umzimba abakwazi ukumelana nesilingo sokuqeda "izingqimba" ezizondwayo ngokushesha, kalula futhi isikhathi eside. Kepha, njengomthetho, ukudla okunjalo okusobala kuhlotshaniswa nengcindezi yomzimba. Ukukhishwa ekudleni kwezakhi ezidingekayo, amaminerali kanye namavithamini kuthinta kabi inhlala-kahle yesimo kanye nesimo sesikhumba nezinwele. Izindlela ezinolaka kakhulu zokunciphisa umzimba zivame ukuholela ekubuyiseleni amakhilogremu alahlekile.
Ukudla i-carbohydrate kuhambisana nokondliwa komzimba njalo ngamandla adingekayo. Akukhiphi ngokuphelele amaprotheni, okuvumela ukuthi ulondoloze ithoni yemisipha. Ukuzibandakanya kwezemidlalo, ngasikhathi sinye, akunzima. Ngokungafani nezinye izindlela eziningi, ngasikhathi sinye - ukukhathala akuveli, akukho ukuphelelwa amandla. Isisu namathumbu kuhlala kuhleli kahle ngenxa yokudla okungapheli kokudla ezingxenyeni ezincane. Imikhiqizo enqunyiwe iqukethe konke okudingekayo ukuze kusebenza kahle kobuchopho kanye nohlelo lwezinzwa.
Phakathi kokushiyeka, ikakhulukazi njengokubuyekezwa kwesikhashana, izinsuku zokuzila. Endabeni yokudla okuqinile kwe-carbohydrate, kunzima kakhulu ukuzibamba futhi ungadli into emnandi. Izinsuku zokuqala ezintathu kuya kwezine isikhathi esinzima, umzimba uzokwakha kabusha futhi uzivumelanise nezimo. Kepha kusuka kwesine - konke kuzoba lula kakhulu.
Ekupheleni kwesonto lesibili, ingxenye yesisindo esilahlekile ingabuya. Kodwa-ke, uma ukondliwa okufanele kube yingxenye yempilo, ngokuqinisekile bazonyamalala. Into esemqoka okufanele uyikhumbule hhayi ukudla, kepha ukudla okufanele. Ukwenqaba utshwala, i-nicotine, ushukela kanye namafutha akuzange kulimaze muntu.
Ukufakwa ushukela ekudleni kuba yinkinga yezinyo elimnandi kakhulu. Kulokhu, kufanele ukuqondiswa ngumthetho: "Konke okulinganiselwe kulungile." Ukuhamba ihora elilodwa epaki kuyosibekela ucezu lukhekhe oludliwayo. Futhi uma wedlulela, ungazithambisa nokuzithambisa.
Ukudla i-carbohydrate: okuzoshiwo udokotela
Odokotela bavame ukunikeza ukudla okuqinile kwe-carbohydrate kubantu abanezifo zesisu nokugaya ukudla: izilonda, isifo sofuba kanye nezifo zenhliziyo. Kepha esimweni sokuzelapha wena uqobo, kufanele uqaphele kakhulu futhi ngisho nangempilo enhle kakhulu, bonana nodokotela.
Ngokunamathela okufanele kulokhu kudla, ngaphezu kokuncipha kwesisindo, odokotela baphawula ukuhlanzwa komzimba kanye nokwenza ngcono umgudu wokugaya ukudla. Kepha baxwayisa ngesidingo sekhefu. Ngakho-ke, uma ukudla kudle inyanga, isikhathi esifanayo kufanele siphumule. Endabeni yerejimeni elukhuni (isonto elilodwa), kuzodingeka ubuye ekudleni kwakho okujwayelekile amasonto amabili. Akubalulekile futhi ukuqeda ngokuphelele amafutha. Amantongomane ambalwa noma uwoyela wemifino muhle kuphela.
Ngenxa yemizamo enjalo, umzimba ufika ezinhlosweni ezithandekayo, ulahlekelwe kufika ku-7 kg wesisindo ngokweqile. Umzimba, kepha awucindezelekile. Imizamo yokunciphisa isisindo ayifaki ukonakala enhlalakahleni. Futhi ukubukeka kuyathuthuka kuphela.
Kungenzeka yini ukunciphisa umzimba emasontweni ama-2
Ukudla okusebenzayo kwezinsuku eziyi-14 kukuvumela ukuthi ususe okungenani amaphawundi ama-3-4 angeziwe. Uma ufuna ukwehlisa isisindo esengeziwe, khona-ke kanye nokudla okufanele okudingayo:
Dlala ezemidlalo ngenkuthalo.
Bala inani lamakhalori atholakele ngosuku, imikhiqizo ye-BJU, lungisa okuqukethwe kwekhalori yansuku zonke ngokuya ngesisindo osifunayo.
Yidla kancane, kepha kaningi, ukuhlafuna ukudla kancane.
Sheshisa imetabolism ngokuphuza amalitha ama-2 amanzi ngosuku.
Bonana nodokotela ngaphambi kokushintsha indlela odla ngayo.
Unganciphisa kanjani isisindo?
Ukuze wehlise isisindo ngesikhathi esifushane, udinga ukuthi ushintshe ngokuphelele indlela odla ngayo, inqubo yansuku zonke futhi unamathele ezincomeni ezinjengalezi:
Yidla okungenani izikhathi ezingama-4-5 ngosuku ngokuphumula okufanayo phakathi kokudla.
Steam, bhaka noma ubilise.
Qapha ngokuqinile ibhalansi uketshezi emzimbeni.
Ungadli, uphuze itiye nekhofi ngaphandle kokufaka ushukela.
Khawulela umthamo kasawoti omncane.
Hlala kancane, hambisa okuningi.
Ukudla emasontweni amabili
Ukudla okungamaviki ama-2 okwehlisa isisindo kungahluka, ngokuya ngenani lesisindo esengeziwe esidinga ukulahlwa. Indlela efanele ehlanganiswe nemidlalo isiza ukuqeda amakhilogremu angeziwe angama-5. Ngaphezu kokuncipha kwesisindo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, umzimba uyahlanzwa ubuthi, i-cholesterol yegazi nomthwalo osesimweni sokugaya ukudla uyancishiswa, umsebenzi wenhliziyo, izinso, isibindi nemithambo yegazi kuyaqina.
2 kg emasontweni ama-2
Amamenyu amasonto amabili ukuqeda ngempumelelo ama-2 kg angenziwa ngokuzimela, ngokuya etafuleni lemikhiqizo evunyelwe neyenqatshelwe:
inyama ebunjiwe, inhlanzi,
Imifino emisha noma ephekiwe kahle
imikhiqizo yobisi ye-nonfat.
ama-khekhe, amnandi, ufulawa,
okunamafutha, okubhemayo, okunosawoti,
isinkwa esimhlophe, pasta.
Susa 5 kg
Abondli bezempilo bathole indlela efanele yokudla izinsuku eziyi-14, bebheka ukuthi ungasusa ngamaphawundi ama-5 angeziwe. Isisekelo sokudla kwakhe siqukethe imikhiqizo yamaprotheni, ngakho-ke, ukudla okunjalo kuyahlukaniswa kubantu abanesifo sezinso. Ukudla okunamaphrotheni kokudla okwenziwe amasonto ama-2:
Ibhulakufesi. I-Coleslaw, iqanda eli-1 elibilisiwe, itiye ngaphandle koshukela.
Isidlo sasemini Isobho ngenyama enamafutha noma inhlanzi enamafutha amancane, ngaphandle kwamazambane nesosi.
Isidlakela santambama. I-Kefir (1 tbsp.).
Ukudla kwakusihlwa Inyama ebunjiweyo ebunjiwe (150 g), inhlanzi enendishi eseceleni yemifino.
Kunokunye ukudla okusebenzayo okukusiza ukunciphisa umzimba ngokushesha. Ungalandela lokho kudla isikhathi eside, ngoba kuyalingana futhi kususelwa ekudla okufanele. Imenyu eyisampula yosuku:
Ukudla kwasekuseni: noma ikuphi okusanhlamvu ngezithelo, itiye ngaphandle koshukela ongeziwe.
Ukudla kwasekuseni kwesibili: izithelo (noma yisiphi).
Isidlo sasemini: isobho, isaladi elikhanyayo, ujusi.
Isidlakela: ingilazi yeyogathi noma ucezu oluncane lweshizi netiye.
Ukudla kwakusihlwa: inhlanzi noma inyama ebusayo, imifino noma okusanhlamvu ukuhlobisa.
Susa 7 kg
Ukusebenziseka okulula futhi okulula ukwehlisa isisindo ngezinzuzo zezempilo kuwukudla kokudla kwamaqanda okwenziwa amasonto amabili, okubizwa nangokuthi ukudla kweMaggi. Isidalwa esinohlelo olulula lokudla asilutholi, ngoba sithola wonke amavithamini, amaminerali, futhi namaphrotheni adingekayo, amafutha, ama-carbohydrate kusuka ekudleni. Imenyu ecishe ilingane nezinsuku eziyisikhombisa:
Amaqanda abilisiwe amaqanda (ama-2 ama-pcs.), I-Grapefruit, itiye elingafakwanga itiye
Iqanda eli-1 elibilisiwe, i-orange, inkukhu ebilisiwe (150 g)
I-fillet yenkukhu ebilisiwe (200 g), iyogathi enamafutha amancane, 1 tbsp. kefir
Amaqanda ama-2 abilisiwe, noma yiliphi ijusi elisanda kufakwa esiswini
Inyama yenkukhu ethambile (150 g), iqanda eli-1, amawolintshi ama-2
Amaqanda ama-2 (abilisiwe), amagilebhisi (2 ama-PC.), 1 tbsp. amanzi
1 tbsp. amanzi ngejusi kalamula, iqanda abilisiwe (1 pc.)
Inyama ebilisiwe (150 g), i-grapefruit
Amaqanda abilisiwe (2 ama-PC.), 1 tbsp. amanzi ngaphandle kwegesi
Ama-drumstick enkukhu abilisiwe noma a-stewed, iqanda eli-1, ulethisi
Isaladi: 1 isanqante ebilisiwe (ku-grater), iqanda, ukhilimu omuncu
1 iklabishi eluhlaza, ujusi wamawolintshi amabili
Izinhlanzi zasolwandle ezibilisiwe (100 g), amaqanda ama-2, ingilazi yamanzi
I-150 g ushizi wekotishi ophansi, isigamu sengilazi
2 amagilebhisi, amaqanda ama-3
I-1 yamagilebhisi, ujusi we-citrus
I-150 g yenkomo ebilisiwe, owolintshi
Susa 8 kg
Eminye yemikhiqizo ephumelelayo yokunciphisa isisindo i-buckwheat, okuqukethwe kwekhalori okungaba ngu-90 kcal nge-100 g. Ukudla ama-monowuckat okunamasonto amabili kunikeza umphumela omuhle kakhulu - ukulahlekelwa yi-8-12 kg noma ngaphezulu ngaphandle kokulimaza impilo. Ama-groats kumele aphekwe kanjena: kusihlwa, uhhafu wekhilogu we-nokunye okufana nokolweni uthele amalitha ayi-1.5 wamanzi abilayo, bopha kuze kuse. Ukudla kosuku olulandelayo kufanele kube nephalishi, ilitha eyi-1 ye-kefir, itiye eliluhlaza namanzi amaminerali.
Ukudla Kwe-carbohydrate Slimming
Umgomo wokudla kwe-carbohydrate - ukusetshenziswa kwenani elifanele ama-carbohydrate ayinkimbinkimbiaqukethe i-fiber kanye nama-pectins. Ziyasiza enqubweni yokwehla kwesisindo, njengoba zigaywa isikhathi eside futhi zigcwalisa umzimba ngezinto ezidingekayo zomkhondo.
Ngakho-ke, okusanhlamvu nezithelo ezinemifino kufanele kube ngaphambi kokudla. I-Durum kakolweni i-pasta ne-bran kodwa hhayi isinkwa se-yeast esivunyelwe.
Abesifazane abafuna ukuqhubeka nendlela yokunciphisa isisindo ukuze bathole imiphumela bavame ukuthakazela umbuzo othi "Yini engingayidla ngokudla kwe-carbohydrate?", "Ingabe ukunciphisa umzimba kungatholakala ngemenyu yamaprotheni?"
Noma yimuphi umondli wezempilo uzophendula ngokuthi kude nakho konke okudliwayo kunama-carbohydrate anele ukuwasebenzisa ekudleni kokudla okune-carbohydrate. Kunokudla okuningi okungelona i-carbohydrate nokudla okuphansi kwe-carb, ekuqaleni ukubheka ukulungele ukuncipha kwesisindo (ngokufanekisa ne-protein). Empilweni yansuku zonke, lokhu kudla kubizwa ngokuthi “ama-carbohydrate asheshayo.” Imithombo yama-carbohydrate anjalo: ubhanana, amazambane, amaswidi, ufulawa. Ukudla i-carbohydrate yokuncipha kwesisindo, njengamaprotheni, kubandakanya ukusetshenziswa okuphoqelekile kweqembu elithile lemikhiqizo yokudla.
Uhlu lokudla okuvunyelwe kokudla kwe-carbohydrate:
imikhiqizo yezinhlanzi nezinhlanzi (ukhokho, i-tuna, i-herring, i-potassa, i-sea bass, i-hake, i-pollock, i-pike, i-shrimp, i-crab, ama-mussels),
inyama (inyama yenkomo, inkukhu, iturkey, izigwaca, unogwaja),
okusanhlamvu nezinhlamvu (i-buckwheat, ilayisi elimhlophe, ibhali, i-oatmeal, ilayisi elinsundu, i-bulgur, i-quinoa),
imifino (ikhukhamba, utamatisi, i-zucchini, isitshalo seqanda, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, iklabishi elimhlophe, ubhontshisi oluhlaza nobhontshisi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-broccoli, u-anyanisi, isithombo, ithanga),
amakhowe (ama-champignons, amakhowe e-oyster),
izithelo namajikijolo (raspberries, sitrobheli, currants, ikhabe, ikhabe, i-apula, iplamu, ibhilikotsi, i-orange, i-grapefruit, i-pomelo, i-kiwi, i-cherry, ama-sitrobheli, ama-currants),
izithelo ezomisiwe (omisiwe, izinsuku, ama-apricots omisiwe, umlotha),
imifino (iparsley, dill, sorrel, isipinashi).
Uhlu lwesampula lwemikhiqizo yokudla ye-carbohydrate yokunciphisa umzimba kufanele ifakwe kwimenyu yansuku zonke. Ngemuva kwakho konke, bonke bacebile kuma-carbohydrate ayinkimbinkimbi, okunikeza umuzwa wokugcoba usuku lonke.
Ngokungangabazeki, ukudla okune-carbohydrate, kanye ne-protein eyodwa, kunezinzuzo eziningi zokunciphisa umzimba, ezifakazelwa ngabasebenza ngokudla kanye nabanye ochwepheshe. Izinzuzo zalo eziphambili yilezi:
ukunciphisa isisindo okusebenzayo
Njenganoma yikuphi ukudla, i-carbohydrate inenombolo ethile qeda, okuyinhloko okuwukusebenza kwayo okuphansi kokwakha isisindo semisipha, okubangelwa ukushoda kwengxenye yamaprotheni.
Njengoba sithole, ukudla okudla ngamaprotheni kuyadingeka futhi! Isipiliyoni esisebenzayo sibonisa ukuthi inketho engcono kakhulu kungaba ukusebenzisa ukudla okudla amaprotheni-carbohydrate. Ngokushintshana kwamaprotheni nama-carbohydrate, ukufeza imiphumela emihle kuzoba lula futhi kusheshe!
Isiphetho: Ngaphambi kokuthi uqale ushintshe indlela odla ngayo, cabanga ngazo zonke izinzuzo nezingozi zokudla okune-carbohydrate, ukuze ungalimazi umzimba, kepha ukusiza ukubhekana namaphawundi angeziwe.
Uma le ndlela ingeyona eyakho, finyelela enye indlela: Ukudla okuphansi kwe-carb.
Ukudla kwe-carbohydrate yokunciphisa umzimba kudinga ukudla okukhethekile. Isibonelo semenyu yansuku zonke, kufaka phakathi imikhiqizo ewusizo yokudla kwe-carbohydrate, sizocubungula ngezansi:
ibhulakufesi - i-buckwheat, ukumnika i-chamomile,
ibhulakufesi lesibili: isaladi lezithelo le-apula, i-orange, i-grapefruit,
isidlo sasemini - pilaf nenkukhu, i-apula ne-plum yenkukhu engafakiwe,
itiye ntambama isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isipinashi kanye ne-cocothie yemifino yekhukhamba,
isidlo sakusihlwa - Isitshulu semifino: i-zucchini, iklabishi, izaqathi, isitshalo seqanda, ingcosana yesesame.
i-oatmeal ne-5 sitrobheli esiphakathi, itiye eliluhlaza,
ujusi we-apula ngama-pancake we-bran,
inhlanzi yolwandle ebhakwe nge-oyili, i-apricot compote, isaladi yemifino (utamatisi, isipinashi, upelepele omnandi, u-anyanisi obomvu, ushizi we-feta),
cocoa ne-cottage shizi i-casserole (ukwakheka: ushizi we-cottage shizi, amaqanda, ukhilimu omuncu),
inyama yenkomo eshiziwe nge-mushroom stew, ushukela omusha we-karoti.
ushizi wasekhishini onama-apricots omisiwe ne-oatmeal egcwele emanzini, umhluzi we-linden,
i-kefir, isamentshisi lesinkwa esingenamvubelo nocezu lweshizi,
isobho yenkukhu nekhofi ebuthakathaka engafakiwe,
i-veal egcotshisiwe nobhontshisi neziphuzo zezithelo.
amaqanda athosiwe kanye nothosi ku-Borodino isinkwa,
iyogathi nocezu lwesinkwa rye,
isifuba senkukhu eyosiwe nemifino entshontshiwe (i-zucchini, isitshalo seqanda, i-asparagus, upelepele, u-anyanisi),
ushizi wekotishi kanye nesaladi lebhanana
inhlanzi eshisiwe ngemifino (izaqathe, beet, izimpande ze-celery).
isangweji ephelele yokusanhlamvu, i-omelet yamaprotheni, cocoa,
i-apple kanye ne-orange smoothie, isinkwa sengane,
isifuba senkukhu eyosiwe ngesitshulu semifino (amakhowe, u-anyanisi, utamatisi, i-zucchini, isitshalo seqanda),
i-casserole (inhlanganisela: i-oatmeal, amaqanda, ushizi we-canta, ama-apula),
isaladi lokudla kwasolwandle (i-shrimp, i-iceberg, i-arugula, i-cherry, isipinashi, i-pinch yesame) nomhluzi we-mint.
iphalishi le-buckwheat, ukhukhamba 2 nejusi utamatisi,
ushizi wasekhishini kanye nama-plums ama-3,
isobho lefayili nekhofi,
2 utamatisi nesiqu sezelendele,
imifino ebhekwe kuhhavini noshizi (izaqathe, u-anyanisi, utamatisi, i-zucchini, isitshalo seqanda, i-asparagus).
itiye eluhlaza kanye ne-quinoa enesipinashi, i-arugula, utamatisi we-cherry,
kefir namakhukhi wokudla,
irayisi elinsundu ngemifino (uphizi oluhlaza, u-anyanisi, izaqathe, utamatisi) kanye ne-compote kusuka kuma-cherries,
imifino ephekiwe nge-quinoa netiye chamomile.
Ukulandela imenyu enjalo isonto lonke, ukunciphisa umzimba ngeke kuthathe isikhathi eside. Ngemuva kwenyanga yokudla okufanele ngokuhambisana nalesi simiso sokudla kwe-carbohydrate, uzophawula ukuthi umzimba waqala ukusebenza kangcono futhi wabhekana nengcindezi, futhi amanoni aqhamuka okhalweni ayohamba angabonakali ngokuphelele.
Ama-carbohydrate okuthola isisindo semisipha
Ukulahlekelwa isisindo akuwona kuphela umgomo wale ndlela yokudla, umongo wawo uwukuba khona kwama-carbohydrate kwimenyu yansuku zonke. Ukudla kwe-carbohydrate yokuthola isisindo semisipha kusanda kuthandwa. Ukufaka isisekelo samaprotheni ekudleni kubandakanya ukufaka iprotein ne-carbohydrate composition, ukuze kuthi ngemuva kwamasonto ayi-2 inqubo yokunciphisa isisindo iqale.
Ukufaneleka kokudla kwamaprotheni kuhle impela. Ukuze ukhule futhi uqinise izicubu zomzimba (futhi wehlise isisindo), kufanele unamathele kwimenyu ekhethekile lapho ushintsha izinsuku zamaprotheni nezinsuku ze-carbohydrate. Ngezinsuku ze- "carbohydrate", ungathatha imikhiqizo evela kumenyu ye-carbohydrate echazwe ngenhla, futhi ku- "protein", ngokulandelana, udle izitsha zamaprotheni emikhiqizweni enesisekelo samaprotheni. Ingxenye yamaprotheni ekudleni kwe-carbohydrate yile:
inyama (okuqukethwe okuphezulu kakhulu kwengxenye yamaprotheni),
Imenyu eyisampula yokuthola isisindo ngokudla kwe-carbohydrate:
Ibhulakufesi: i-oatmeal obisini olunamakhaza agqamile nebhanana, i-apple compote,
Isidlakela: isaladi lezithelo ze-apula kanye ne-orange,
Isidlo sasemini: iTurkey ebilisiwe ngesaladi (utamatisi, ukhukhamba, upelepele, isipinashi) nekhofi,
Itiye eliphakeme: i-cottage shizi casserole nomhluzi we-chamomile,
Ukudla kwakusihlwa: I-omelet yamaprotheni kusuka emaqanda ama-3, i-kefir.
Indlela yamaprotheni yokunciphisa umzimba ibilokhu ithandwa njalo emzabalazweni wokunciphisa isisindo nokuzuza kwemisipha. Amantombazane nabesifazane abaningi baphupha basebenzise ingxenye yamaprotheni balahlekelwe ngamakhilogremu amaningi, ngoba ingenye ephumelela kakhulu umzimba. Umphumela ofiselekayo utholakala ngokusetshenziswa kwezindleko zomzimba isikhathi eside sokulungiswa kokudla kwamaprotheni. Ngokushintshanisa phakathi kokudla okwenziwe nge-carbohydrate kanye nokudla kwamaprotheni, ngeke uzuze isisindo kuphela, kepha futhi uqinisa izicubu zomzimba wakho wonke!
Imenyu ingaba ukuhlukahluka kakhulu. Ngakho-ke, ukudla okunjalo ngeke kukhathaze isikhathi eside futhi kuzovumela owesifazane ukuba anciphise isisindo ngokuthula. Sinikeza ezinye zezinto ezithakazelisa kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu - izitsha ezinempilo okufanele zifakwe kwimenyu yakho!
Amaresiphi wokudla kwe-carbohydrate:
I-Buckwheat porridge enama-mushroom "ama-carbohydrate okwehlisa isisindo"
Buckwheat iphalishi ngamakhowe
Kumalitha ayi-0,5. ubilise amanzi 200 gr. i-buckwheat. Usawoti ongalibaleki kancane. Ngokwehlukana, gazinga 300 gr. amakhowe e-champignon (noma amakhowe e-oyster). Sixuba iphalishi le-buckwheat kanye namakhowe, engeza ibhotela elincane.
300 gr faka ubhontshisi ku-0,5 amalitha. amanzi abandayo amahora amathathu. Bilisa kuze kuthambe. I-anyanisi oqoshiwe oqoshiwe. 100 gr. ama-walnuts adlula nge-grinder yenyama noma nge-grinder yekhofi, inhlanganisela engaxhunyiwe ehlanganiswe ihlanganiswa nezinongo zokukhetha kwakho (ama-hops-suneli, amnyama kanye / noma upelepele obomvu). Hlanganisa ubhontshisi, u-anyanisi kanye nama-walnuts emhlabathini epanini. Fry imizuzu eyi-10.
Isifuba senkukhu ethosiwe ku-batter (umkhiqizo onamaprotheni amaningi):
Isifuba senkukhu esosiwe
500 gr. sika ibele lenkukhu libe yimifino. Usawoti, upelepele. Shiya imizuzu eyi-10. Roll ufulawa, bese iqanda. Fry epanini lokuthosa elishisayo nhlangothi zombili kuze kube nsundu yegolide.
Inkukhu Yenkomo Stroganoff
500 gr. usike umucu wenkukhu ube yimichilo. Sibeka epanini elishisayo. Esimweni sokulungela sinesikhathi sikasawoti kanye nopelepele. Okulandelayo, engeza i-20 gr. Isinaphi esivamile saseRussia bese uthele wonke ama-100 gr. ukhilimu u-10% wamafutha. Hlanganisa kahle, bese ushiya ukushisa ukushisa okuphansi kweminye imizuzu emi-3.
IPikeperch ne-champignon julienne
500 gr. i-zander fillet uthathe ama-cubes amancane. Usawoti, upelepele, ufafaze ujusi kalamula othosiwe. Fry epanini. 500 gr. sinquma amakhowe abe yizicucu futhi ngokuhlukile gazinga, kodwa ngokufakwa ibhotela. Sibeka abenzi be-cocotte, uthele ukhilimu ngamafutha we-10%. Hlikihla ngaphezulu kwe-20 g. noma yiluphi ushizi onzima. Beka i-cocotte kuhhavini imizuzu emi-5.
I-Omelet enamakhowe, utamatisi noshizi
Phula amaqanda ama-5-6 esitsheni esijulile, shaya nge-whisk kuze kube yilapho kutholakala isisindo esikhulu noma esingaphansi se-liquid. Ngalesi sikhathi, amagremu angama-200 othosiwe asevele eselungile. amakhowe notamatisi abasikiwe (susa isikhumba kumatamatisi!). Usawoti, upelepele kulesi sigaba sokupheka njengoba ufisa. Hlanganisa zonke izithako. Senza i-omelet ngendlela ejwayelekile ngaphansi kwesivalo esivaliwe!
Siyethemba ukuthi uzothatha ezinye izindlela zokupheka bese uzifaka kumenyu yakho. Futhi uma kunomgomo wokuqala ukudla nsuku zonke, funda imenyu pp kuzindlela zokupheka.
Ukudla i-carbohydrate - wehlise isisindo ngokumamatheka
Kunombono wokuthi ukuze wehlise isisindo, udinga ukudla amaprotheni amaningi, futhi unciphise ukudla kwama-carbohydrate. Kodwa ezinye izazi zokudla ezikholelwayo zikholelwa ukuthi kungukukhishwa kahle kwekhabhoni namanzi okudingekayo ukuze unciphise isisindo. Ukudla okwenziwe nge-carbohydrate okususelwa kule nqubo kuyinto esemqoka: kufanele ulondoloze emzimbeni wakho inani elinoshukela elanele impilo ephelele futhi esebenzayo, kepha akwanele ukuguqula ube ngama-deposits angamafutha.
Ukudla kwe-carbohydrate cishe akunazo iziphikiso. Kuvunyelwe ukunamathela kuyo ngisho nakwabesifazane abakhulelwe. Imenyu ilinganise ngokuphelele, ukudla okunjalo kuzoba wusizo hhayi ngokulahlekelwa isisindo kuphela, kepha futhi nokuhlanza umzimba wezinhlungu nobuthi. Yenqaba ukusetshenziswa kwale ndlela kufanele kube ngabantu abahlushwa yi:
izifo ezingamahlalakhona zethambo lesisu.
Kunezinhlobo eziningi zokudla okunempilo kwe-carbohydrate:
ukwehlisa isisindo (inketho elula futhi eqinile),
ukwakha izicubu zomzimba
Kukhona nemenyu ekhethekile ye-carbohydrate yesimo esihle. Kepha noma ngabe ulutha ukudla okunjani, kufanele unamathele kule migomo elandelayo:
hlukana nokudla kwansuku zonke kube izidlo ezingama-5-7,
yidla ngesikhathi esisodwa inani lokudla elinomthamo wengilazi engadluli kweyodwa,
udle isidlo sakusihlwa ngaphambi kwesikhathi esingama-19 00 h,
phuza okungenani ilitha nengxenye yamanzi okuphuza phakathi nosuku (kungenzeka nge-ulamula),
nciphisa ukunatha usawoti,
yenqaba imikhiqizo engavunyelwe yile ndlela.
Futhi zama ukupheka zonke izitsha ngezindlela zokudla:
Ukudla amapheshana ezinhlobonhlobo zokudla okwamukelekayo. Ungasebenzisa:
yonke imifino ngaphandle kwemingcele,
okusanhlamvu (khetha okusanhlamvu okuphelele),
izindunduma (ubhontshisi, uphizi, udali).
Ukudla i-carbohydrate akuyona imifino, ungafaka ekudleni kwakho:
Ithebula: eminye imikhiqizo evunyelwe, okuqukethwe kwabo kwekhalori ne-BJU
amaprotheni (g nge-100 g yomkhiqizo) amafutha (g nge-100 g yomkhiqizo) ama-carbohydrate (g nge-100 g yomkhiqizo) amakhalori
isitshalo seqanda 0,6 0,1 7,5 22
ubhontshisi 6,1 0,1 8,1 59
anyanisi 1,6 0 9,3 41
izaqathe 1,3 0,1 6,3 29
ukhukhamba womhlabathi 0,7 0 3,1 15
amazambane abilisiwe 2 0,3 16,5 80
i-apula 0,4 0 11,3 46
eliphakathi kwe 0,4 0 10,7 42
ulamula 0,9 0 3,6 31
i-orange 0,9 0 8,4 38
sitrobheli zasendle 1,8 0 8,1 41
i-currant emnyama 1 0 8 40
iplamu 0,8 0 9,9 43
amagilebhisi 0,4 0 17,5 69
ubhanana 1,5 0 22,4 91
iwundlu 16,3 15,3 0 203
inyama yenkomo 18,9 12,4 0 187
inkukhu 20,8 8,8 0,6 165
i-kefir 0% 2.8 0 3,8 29
i-kefir 1% 2,8 1 4 37
ubisi 0% 2,8 0 4,6 34
ubisi 1% 2,8 1 4,6 43
ubisi olubunjiwe 3.2% 2,9 3,2 4 57
ushizi wekotishi onamafutha amancane 18,2 0,6 1,8 89
ibhali iphalishi 3,2 0,5 22,7 102
amabele iphalishi 3 0,8 17,2 92
iphalishi yelayisi 1,5 0,2 17,3 79
ibhali iphalishi 1,4 0,3 18,7 84
iphalishi le-buckwheat 4,5 1,6 27,4 137
ama-hazelnuts 16,1 66,9 9,9 704
ama-walnuts 13,8 61,3 10,2 648
ama-champignons (okusha) 4,3 0,9 1,4 29
uphizi (kuphelele) 23 1,2 53,3 303
pasta 3,5 0,4 23,2 112
Ubhanana kanye namagilebhisi akuvunyelwe yindlela, kepha ubungako bawo kufanele buqashwe ngokucophelela. Nikeza ukukhetha kule mikhiqizo equkethe ushukela wemvelo (izithelo, imifino, ubisi, isitashi).
Imikhiqizo elandelayo ivinjelwe:
utshwala (ngaphandle kwewayini elibomvu elomile),
izitsha ezinamafutha nezinongo
imikhiqizo yobisi nemikhiqizo yobisi enamaphesenti amaningi okuqukethwe kwamafutha.
Ithebula: Imenyu enemininingwane yeviki
usuku ukudla nesikhathi sidlani
ibhulakufesi (8 00) i-buckwheat porridge *, ingilazi ye-kefir
isidlo sasemini (10 00) amawolintshi - ama-2 ama-PC.
isidlo sasemini (12 00) ubhontshisi ngezaqathi notamatisi
itiye eliphakeme (14 00) isaladi lamakhukhamba
isidlo sakusihlwa (17 00) oatmeal ngezingcezu zezithelo
isidlo sakusihlwa (19 00) ingilazi ye-kefir
2 ibhulakufesi (8 00) oatmeal ngezingcezu zezithelo
isidlo sasemini (10 00) i-apple smoothie
isidlo sasemini (12 00) isaladi leqanda noshizi
itiye eliphakeme (14 00) sitrobheli eshibhile
isidlo sakusihlwa (17 00) iklabishi edliwayo enenkukhu
isidlo sakusihlwa (19 00) berry jelly
3 ibhulakufesi (8 00) ukuthosa ngebhotela lamantongomane, ingilazi yetiye eliluhlaza
isidlo sasemini (10 00) iparele elilodwa elikhulu
isidlo sasemini (12 00) isobho semifino
itiye eliphakeme (14 00) ingilazi yejusi esisanda kufakwa
isidlo sakusihlwa (17 00) inhlanzi ebilayo nemifino
4 ibhulakufesi (8 00) ushizi wasekhishini onamajikijolo
isidlo sasemini (10 00) ukuthosa inyama nenyama nemifino
isidlo sasemini (12 00) isobho seklabishi elincane
itiye eliphakeme (14 00) umvini owodwa ophakathi
isidlo sakusihlwa (17 00) upelepele wensimbi
isidlo sakusihlwa (19 00) jelly yezithelo
5 ibhulakufesi (8 00) isaladi isanqante, yoghurt yemvelo ngaphandle izithasiselo
isidlo sasemini (10 00) ama-kiwi amabili
isidlo sasemini (12 00) isobho lemifino emhlophe
itiye eliphakeme (14 00) iyogathi yemvelo ngaphandle kwezengezo
isidlo sakusihlwa (17 00) amakhowe aphathwe ngelayisi
isidlo sakusihlwa (19 00) itiye lezithelo
6 ibhulakufesi (8 00) ibhali leparele elixubene ne yoghur
isidlo sasemini (10 00) cocoa
isidlo sasemini (12 00) isobho lenhlanzi
itiye eliphakeme (14 00) jelly yezithelo
isidlo sakusihlwa (17 00) ilayisi ngemifino
isidlo sakusihlwa (19 00) ubisi lwebhanana
7 ibhulakufesi (8 00) ushizi wekotishi ngezithelo
isidlo sasemini (10 00) ama-tangerine amaningana
isidlo sasemini (12 00) amazambane abhakwe - ama-3 ama-PC.
itiye eliphakeme (14 00) isaladi le-beetroot
isidlo sakusihlwa (17 00) i-spaghetti enama-mushroom ahlotshisiwe
isidlo sakusihlwa (19 00) ingilazi yeyogathi
* Zonke izinhlamvu zibilisiwe emanzini ngesengezo esincane sikasawoti.
Ngeviki lesibili lokudla, phinda le menyu ngokulandelana okuphambene, kepha ungenza okwakho. Ungakhohlwa ukuthi inani elivumelekile lama-carbographs ngosuku lingu-120-150.
Ungathola inani lamakhebhula kumathebula angenhla, noma ubone ukufakwa komkhiqizo. Inani lama-carbohydrate lilingana nenani lama-carbograph.
Idizayelwe isikhathi eside. Ngesikhathi sokudla emzimbeni wakho iprotheni kanye nama-metabolism omzimba ajwayelekile, uzothola inani elanele lezinto zokulandela umkhondo namavithamini ekudleni okudingayo. Ngenxa yalokhu, ukwehla kwesisindo kuzokwenzeka. Ungalahlekelwa kuze kufike ku-2 kg ngeviki.Lesi sibalo asihlaba umxhwele kakhulu, kepha kuphephile ukusho ukuthi lesi isisindo ngeke sibuye.
Enguqulweni elula, kuyadingeka ukushiya ushukela nefulawa emhlophe. Kuvunyelwe ukudla inyama, inhlanzi kanye nemikhiqizo yobisi enamafutha amancane.
Le nketho ifaka imikhawulo enzima yesonto elilodwa, bese ubuyela ekudleni okujwayelekile. Imikhawulo ngemuva kokushiya uhlobo oluqinile lokudla ibekelwa ufulawa, amanoni futhi amnandi. Ukudla okuqinile kwe-carbohydrate kunikeza inketho yayo yemenyu yamasonto onke. Kunconywe ukuthi ukulayisha okunjalo kungaphindwa kabili ngenyanga, kodwa ngokuya izinkomba zezokwelapha, ukuphindaphinda kuvunyelwe ngemuva kwesonto. Ukwehla kwesisindo kufinyelela ku-7-8 kg.
Ithebula: Ukudla okuqinile kwe-carbohydrate (izinsuku ezingama-7)
usuku lokudla okuvunyelwe ukudliwa ngalolu suku
Amazambane abhakwe (ngaphandle kukasawoti) - 400 g,
imifino - 10 g,
i-kefir ngamaphesenti amancane wokuqukethwe kwamafutha - 500 ml.
Ushizi wekhishi ongenawo amafutha - 400 g,
Izithelo (ngaphandle kwamagilebhisi nobhanana) - 400 g,
i-kefir engenamafutha - 500 ml.
I-fillet yenkukhu ebilisiwe - 400 g,
Amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi - okungenani amalitha ayi-1.5.
Ukudla Kwe-carbohydrate Yokwakha Imisipha
Ukuze uthole isisindo, kufanele ulandele izilinganiso ezinjalo ekudleni:
amafutha - 15%,
amaprotheni - 30%,
carbohydrate - 55%.
Engxenyeni yokuqala yosuku, ukudla kwe-carbohydrate kufanele kudliwe, kuthi okwesibili - amaprotheni. Umgomo wokudla komsoco ubuye uhlukane kakhulu: amahlandla ama-6-7 ngosuku. Ungakhohlwa ukuthi indlela ejwayelekile yokuphuza amanzi akufanele ibe ngaphansi kwamalitha nohhafu ngosuku. Ukufaka isicelo sokudla ukuze uthole isisindo akunconywa kubantu abanezifo zesisu nokuhluleka kwe-hormonal. Isifundo sihlala cishe inyanga eyodwa.
Ithebula: imenyu yesampula yokuthola isisindo semisipha
ibhulakufesi (8 00) i-buckwheat porridge emanzini, amaqanda amabili abilisiwe
isidlo sasemini (10 00) amabhlunga ommbila ngobisi
isidlo sasemini (12 00) ama-buckwheat namakhowe, ujusi osanda kufakwa
itiye eliphakeme (14 00) ubhanana
isidlo sakusihlwa (17 00) amakhekhe ezinhlanzi ezintshontshiwe, isaladi le-shrimp
isidlo sakusihlwa (19 00) ushizi we-cottage (okuqukethwe okunamafutha 0%) ngezingcezu zezithelo
Kukhona nohlobo lokudla kwe-carbohydrate yokuthola isisindo semisipha yabantu abane-ectomorphic physique.
Ngomzimba wohlobo lwe-ectomorph, amahlombe amancane nesifuba, izitho ezithobekile nezinde ziyimpawu
Lolu hlobo lwabantu lunconyelwa ukusebenzisa ama-carbohydrate amaningi ahamba kancane ngangokunokwenzeka, atholakala ku:
Ithebula: Imenyu eyisampula ye-ectomorph
ibhulakufesi (8 00) izikhulumi ezingamaqanda amabili, i-oatmeal, ubisi olunamafutha amancane
isidlo sasemini (10 00) peach curd
isidlo sasemini (12 00) pasta nenkukhu ebilisiwe, granola ngobisi
itiye eliphakeme (14 00) abilayo isiphuzo sobisi, amajikijolo
isidlo sakusihlwa (17 00) isobho le-peya enenkukhu, isaladi yemifino, ujusi osanda kufakwa
isidlo sakusihlwa (19 00) izithelo
Ithebula: imenyu yesampula yabesifazane abakhulelwe
I-Porridge (ungakhetha i-buckwheat, ilayisi, i-oat noma ukolweni), iphalishi kufanele libiliswe obisini namanzi ngesilinganiso esingu-50/50 ngokufakwa okulula kosawoti,
iqanda elilodwa elibilisiwe
ucezu oluncane lwesinkwa, ungangeza ngebhotela nocezu lukashizi onzima,
ingilazi eyodwa ye-ryazhenka.
Isidlo sasemini Izithelo zivunyelwe noma yiziphi, ngaphandle kuka-citrus.
Iklabishi elibunjiwe, kunconywa ukuyipheka kumhluzi wenyama,
isaladi yemifino, ivunyelwe ukuyinikeza ngo-ukhilimu omuncu,
ingilazi eyodwa yelayisi elisanda kufakwa (hhayi i-citrus).
Itiye eliphakeme Amajikijolo ambalwa, khetha ama-cherries noma ama-gooseberries, aqukethe izakhi eziningi zokulandela ngomkhondo.
Ucezu lwenhlanzi ebilisiwe noma entshontshiwe,
idlanzana le-sitrobheli (ungalifaka kwi-curd - uthola isobho elihle),
ingilazi eyodwa ye-compote.
Ungakhohlwa ukuthi udinga ukuphuza inani elidingekayo lamanzi ngosuku. Imvamisa inani elifanele linconyelwa udokotela wezifo zabesifazane. Zama ukunciphisa ukudla usawoti kanye noshukela.
Ukudla ama-carbohydrate kuyisihluthulelo somoya omuhle
Abantu abavame ukuzizwa bedabukisayo noma behlushwa ukudangala, kuzosiza ukulandela lolu hlobo lokudla kwe-carbohydrate. Ngenxa yokuthi i-carbohydrate ehamba kancane futhi esheshayo iqala ukungena emzimbeni ngesilinganiso esifanele, ukukhiqizwa kwe-hormone serotonin kuzokhuphuka, okuyiwona obangela ukujula nezinga lentokozo.
Ithebula: Imenyu yokudla eyisampula yokuphakamisa
Isaladi enenkukhu, ubhontshisi notamatisi,
Isidlo sasemini Izingcezu ezimbili ezincane zikashokoleti omnyama nekhofi (alukho ubisi).
asanda kufakwa ujusi karoti.
Itiye eliphakeme I-Apple noma amazambane abunjiwe kuwo.
Inhlanzi ebilisiwe ngelayisi,
esisanda kufakwa ujusi wewolintshi.
Ukubambelela kulokhu kudla kufanele kube izinsuku ezingama-3-5.
Yini ewusizo ukuhlanganisa isidlo ne
Ukunakekelwa komzimba kuhlangene nokudla kwe-carbohydrate kuzoletha imiphumela ebonakalayo nangaphezulu. Yenza imaski ehlukahlukene yobuso nomzimba, ukugoqwa kwe-anti-cellulite, ukuya kumaseshini amaningi we-massage. Futhi-ke, ungakhohlwa ngemisebenzi yomzimba. Kungaba:
Kulabo abasebenzisa ukudla okune-carb ephezulu ukuthola izicubu zemisipha, udinga ukuzivocavoca ngokuya ngezinhlelo ezikhethekile zokwakha izicubu ezindaweni ezithile.
Isobho seNkukhu yenkukhu
Ukuze ulungiselele isobho elimnandi uzodinga imikhiqizo elandelayo:
uphizi oqoshiwe - 1.5 tbsp;
inkukhu - 300 g
amazambane - ama-2 ama-PC.,
izaqathe - 1 pc.,
u-anyanisi - 1 pc.,
i-turmeric - 0.5 tsp.,
usawoti, upelepele, uwoyela wemifino - ukunambitha.
Cwilisa uphizi emanzini abandayo, ushiye ukuvuvukala isikhathi esingangehora.
Hlambulula inyama yenkukhu, ususe isikhumba, uma ikhona.
Pheka nethanga ngehora, ususe amagwebu njalo.
Lapho i-peas isilungile, engeza amazambane asikiwe epanini.
Izaqathi ezigayiwe no-anyanisi oqoshiwe, gazinga emafutheni ngokufakwa kwe-turmeric.
Faka i-gazinga kusobho lapho amazambane esevele eselungile.
Bese upheka kuze kuphekwe ngokuphelele.
Vala isobho eliphekwe ngokuqinile bese umela imizuzu engu-15 ukuya kwe-15.
Faka imifino ngaphambi kokukhonza.
Isobho le-pea elimnandi ngenkukhu eligcwele kahle, wonke umndeni uzojabula ngesitsha esinjalo
Inani lokudla kwendlo eqediwe (ku-100 g yomkhiqizo):
amaprotheni - 2.3 g
amafutha - 0,8 g
carbohydrate - 4,5 g
amakhalori - 33.1.
Stew ne Ubhontshisi, Inkukhu no Utamatisi
indali yenkukhu - 500 g,
ubhontshisi owomile - 150 g,
izimpande anyanisi kanye izaqathe - 3 ama-PC.,
utamatisi kanye nopelepele omnandi - ama-2 ama-PC.,
ugarliki - ama-clove angu-1-2,
iqabunga le-bay, dill, usawoti - ukunambitha.
Cwilisa ubhontshisi emanzini abandayo ihora. Bese ubilisa ngaphandle kokushintsha amanzi kuze kuthambe.
Geza i-fillet bese uthathe ama-cubes.
Fry it kancane emafutheni, bese udlulisela ezitsheni lapho uzopheka khona isidlo.
Faka izaqathe, upelepele no-anyanisi enyameni.
Stew imizuzu engu-15.
Ngemuva kwalokho faka ubhontshisi, utamatisi wejulienne, ugarliki oqoshiwe, iqabunga le-bay kanye no dill. Usawoti (inani likasawoti kufanele lincane).
Stew kuze ithenda.
I-Bean stew ukunambitheka okujwayelekile kokudla okujwayelekile
amaprotheni - 5.3 g,
amafutha - 3.2 g
amakhalori - 64.9.
I-Mushroom Stewed Rice
Ekuphekeni, kufanele ukhethe ilayisi njenge-pilaf. Uzodinga:
ilayisi - 200 g
ama-champignon amasha (noma amanye amakhowe) - 400 g,
usawoti, izinongo, amakhambi - ukunambitha.
Faka kuqala irayisi emanzini abandayo.
Hlambulula amakhowe bese usika ku-cubes.
Hlanganisa anyanisi oqoshiwe kanye gazinga phezu kokushisa okuphakathi.
Khipha amanzi ngokweqile kusuka elayisi.
Faka irayisi kumakhowe uxube.
Lapho le ngxube iqala ukubilisa, uthele kancane emanzini, ngokwanele ukufihla irayisi.
Usawoti (isilinganiso esincane sikasawoti), sinciphise ukushisa kube ubuncane bese uvala isivimbo.
Imizuzu imizuzu engama-20-25.
Faka izinongo imizuzu emibili ngaphambi kokupheka.
Govuza isidlo kuphela ngemuva kokulungela.
Ilayisi ngamakhowe isitya elula, egculisayo, enisela umlomo futhi ayithathi isikhathi esiningi.
Inani lokudla kwendlo eqediwe (kumagremu ayi-100 womkhiqizo):
amaprotheni - 2.4 g,
amafutha - 1,7 g
carbohydrate - 16.9,
amakhalori - 90.
Ukuphuma ekudleni kubekezelelwa kalula ngokwengqondo futhi akunamphumela wokusebenza. Kancane kancane kufanele ubuye ekudleni kwakho okujwayelekile, kepha ngaphandle kokwethula isidlo esingaphezu kwesisodwa ngosuku. Amandla aphansi kakhulu ukuthi ama-kilos alahlekile azobuyela. Yehlisa okungenani ukusetshenziswa kwamaswidi, ufulawa nemikhiqizo ye-confectionery, ethosiwe futhi yabhema. Ngesikhathi sokukhishwa, le mikhiqizo kufanele ilahlwe.
Imenyu yokudla ilinganise ngokuphelele, wonke amavithamini kanye namaminerali adingekayo emzimbeni anikezwa emzimbeni ngamanani anele - yingakho imiphumela emibi yokudla okune-carb ephezulu ingekho. Kepha kukhona ezinye izingqinamba
Ukudla kunemigomo yokudla eyindida - kunzima kwabanye abantu ukuthi baphendukele ngokwengqondo kuhulumeni onjalo.
ukudla kokugcina kungakadluli eziyisikhombisa kusihlwa - ezinsukwini zokuqala kokudla kungaba nzima ukulala ngenxa yendlala,
amakhalori aphansi nsuku zonke angadala ukukhathala okwandayo.
Umbono wodokotela nabezempilo
Odokotela kanye nezazi zezempilo baphawula ukudla okulinganiselayo kwe-carbohydrate. Ngokugcinwa kwayo, azikho izinkinga zempilo ezinkulu ezisongelwayo. Futhi lapho uhlanganisa umsoco we-carbohydrate nomsebenzi womzimba, umphumela omuhle kakhulu uzotholakala.
Vele ungalahli iqiniso lokuthi uma inhloso yakho kungukunciphisa isisindo somzimba, hhayi ukuwina umncintiswano wokwakha umzimba, kuzodingeka ukuthi ushintshe ekudleni uye ekudleni okulinganiselayo ukuze ulondoloze umphumela owuzuzile.
Isazi sezempilo u-Anna Belousova
Imiphumela nokubuyekezwa kokunciphisa umzimba
Kwi-Intanethi kunezindlela ezimbalwa ezahlukahlukene zokunciphisa umzimba - izinsuku eziyi-7 ku-kefir, izinsuku ezi-5 kwi-buckwheat, njll (ngize ngabona ubhiya kwenye indawo). Kuyiqiniso, banikeza umphumela, kepha kukhona ukucatshangelwa - ukuncipha kwesisindo kuwukuqhekeka komhlaba: umzimba uqala ukuzidla ngokungadingekile ngokwawo, ususe ngokuphelele lawo mafutha ngamanzi nangamasipha. Uma uzivocavoca ngesisindo, inketho enjalo ngemuva komjikelezo wokuthola isisindo akunakulingana, ngoba kanye namafutha angenakugwenywa kuzoshisa izicubu ezitholwe ngobunzima obunjalo.
Ngemuva kweviki lokuqala lokudla okumnandi kangaka, ngaba nokuphumelela kokuqala esikalini - ukukhipha u-1.5 kg! Futhi lokhu kungemva kwezinyanga ezi-3 zokuxineka kwengqondo. Ngokuvamile, ngenyanga ngilahlekelwe yi-4.5 kg. Ngiphinde ngibuyele ekudleni kwami ​​okujwayelekile okufanelekile. Manje isisindo sishiya okuncane, okungenza ngijabule kakhulu. Ngokuzayo, ngithole ukuthi lolu hlobo lokudla olunikezwa ngabaqeqeshi ezikhungweni zokuvivinya umzimba ukuze basheshise imetabolism.
Amantombazane, lokhu akuyona ngisho nokudla, kuyindlela yami yokuphila manje. Ngilahlekelwe ngama-5 kg ​​entwasahlobo, ukusuka kuma-68 kuye kuma-63, nokukhuphuka kuka-155, lokhu kuhle kakhulu soooooooooooooooooooo. Angifakanga ugaxekile, noma ngihlala ngivumela ukuthi ngiphumule.